ကိုလက်စထရောတက်နေခြင်းနှင့် ခရီးသွားနည်းများ - Page 36 of 51 - Hello Sayarwon
ခန္ဓါကိုယ်မှာ ကိုလက်စထရောပမာဏ များနေခြင်းဟာ ခရီးသွားရာမှာ အဆင်မပြေဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သင့်မှာ ကိုလက်စထရောတက်နေပြီး ခရီးသွားဖို့ကို ဘယ်လိုမှရှောင်လွှဲမရဘူးဆိုရင် အစိုးရိမ်လွန်နေစရာမလိုပဲ သေသေချချာ ဂရုတစိုက် ပြင်ဆင်သွားခြင်းအားဖြင့် ဒီအခက်အခဲကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုလက်စထရောတက်နေသူတစ်ယောက် လေယာဉ်နဲ့ ခရီးသွားရတော့မယ်ဆိုရင် အုတ်ဂျုံ၊ ထောပတ်၊ သကြားအညို စတာတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ granola bar၊ ပန်းသီး၊ အခွံမာသီး စတဲ့ အဆာပြေစားစရာတွေ ဆောင်သွားသင့်ပါတယ်။ ချိစ်၊ မြေပဲထောပတ်၊ ယိုနဲ့ အချိုရည်တွေကတော့ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာ တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း ခံရနိုင်တဲ့အတွက် ယူမသွားသင့်ပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို ကျော်ပြီးမှ အဆာပြေမုန့်ဝယ်သွားသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကား၊ ဘတ်စ်ကား၊ ရထား စတာတွေနဲ့ ခရီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်နှစ်သက်ရာဝယ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ သွားလေရာအလွယ်တကူ သယ်သွားနိုင်တဲ့ အိပ်ခပ်သေးသေးတစ်ခုနဲ့ ထည့်သွားတာပါပဲ။ မုန်လာဥနီ၊ ကုလားပဲ၊ သံလွင်ဆီ၊ နှမ်း စတာတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ hummus မုန့်၊ အခွံမာသီးနဲ့ ပန်းသီးတို့ဟာ ကိုလက်စထရောတက်နေသူတွေစားသုံးဖို့ အသင့်တော်ဆုံး အဆာပြေစားစရောတွ ဖြစ်ပါတယ်။
ခန္ဓါကိုယ်ရေဓါတ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ရေများများသောက်ပါ။ အချိုရည်မသောက်ပါနဲ့။ အချိန်မရွေး ရေဖြည့်ပြီး လိုသလိုသောက်သုံးနိုင်အာင် ရေဘူးအမြဲဆောင်ထားပါ။ လေယာဉ်နဲ့ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် ရေဘူးအလွတ်ဆောင်သွားပီး စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုကျော်တာနဲ့ ရေဖြည့်သွားပါ။ ကားနဲ့ခရီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ရေခဲပုံးထဲ ရေဘူးတွေဖြည့်ထားပါ။
ကိုလက်စထရောတက်နေသူတွေအဖို့ ခရီးသွားတိုင်း ဂရုပြုဆောင်ရွက်သင့်တဲ့အရာကတော့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်အကြာကြီး စီးရသူတွေအနေနဲ့ အချိန်ရရင်ရသလို ဟိုဟိုသည်သည် လမ်းလျှောက်ပြီး ခြေဆန့်လက်ဆန့် လုပ်ပေးပါ။ ကားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်သွားရမယ့်နေရာနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးမှာကားရပ်ပြီး လမ်းလျှောက်ပေးပါ။ တောင်တက်ခြင်း၊ ရှုခင်းကြည့်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်းစတဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်လည်း အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။
ခရီးသွားတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ သင်သောက်နေကျဆေးဝါးတွေကို အလုံအလောက် ထုတ်ပိုးပြီးထည့်သွားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ အခန့်မသင့်လို့ ခရီးလမ်းကြောင်း ကြံ့ကြာနေရင် ကာမိအောင် ခရီးသွားမယ့်ရက်ထက် ရက်အနည်းငယ်စာ ပိုထည့်သွားပါ။ ဆေးဆိုင်တိုင်းမှာ သင်လိုချင်တဲ့ဆေး ရှိမရှိမသေချာတဲ့အတွက် လမ်းခရီးမှာ ဆေးဝယ်လို့ရမှာပဲလို့ တထစ်ချမယူဆစေချင်ပါဘူး။ ဆေးပြတ်သွားခြင်းက သင့်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာမဆို ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ အစားအသောက်တွေကိုသာ ရွေးချယ်စားသုံးပါ။ Fast food တွေထဲက ရွေးရမယ်ဆိုရင်လည်း အသုတ် (salad) တွေပဲ ရွေးစားပါ။ စားသောက်ဆိုင်မှာ စားရတိုင်း သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သဘာဝအတိုင်းရရှိတဲ့ အစေ့အဆံတွေနဲ့ အဆီနည်းတဲ့အသားတွေကိုသာ ရွေးချယ်စားသုံးပါ။ ချိစ်နဲ့ ခရမ်းဆော့စ်ပါဝင်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို ရှောင်ပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြား ခရီးသွားရမယ်ဆိုရင် ကိုယ်သွားမယ့်နိုင်ငံမှာ ရရှိနိုင်တဲ့ ဒေသအစားအစာတွေကို ကြိုတင်လေ့လာထားခြင်းအားဖြင့် မှန်ကန်သင့်တော်တဲ့ရွေးချယ်မှု ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျှင်ဓါတ်ပါဝင်တဲ့ ဖြည့်စွက်စာတွေ ယူဆောင်သွားပါ
ခရီးသွားတဲ့အခါ သင်စားသုံးသင့်တဲ့ အမျှင်ဓါတ်ပမာဏကို နေ့စဉ်ပြည့်မီအောင် စားသုံးဖို့ အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးဝလံတွေ စားသုံးလို့မရနိုင်တဲ့ ခရီးမျိုးသွားတဲ့အခါ psyllium နဲ့ အုတ်ဂျုံအမျှင်ဓါတ်လို ဖြည့်စွက်စာတွေ ယူဆောင်သွားသင့်ပါတယ်။ အမျှင်ဓါတ်ပုံမှန်စားပေးခြင်းက သွေးတွင်းကိုလက်စထရောပမာဏကို အကောင်းမွန်ဆုံး ထိန်းညှိပေးနိုင်ကြောင်း လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေက သက်သေပြထားပါတယ်။
4 tips for traveling with high cholesterol. http://www.smarthealthtoday.com/traveling-with-high-cholesterol/. Accessed August 15, 2017.